Lixabiso OEM Valve kunye mveliso efanelekileyo kunye nabathengisi | Ouzhan
I-Brass ingxubevange eyenziwe ngobhedu kunye ne-zinc, kwaye yinto efanelekileyo yokuvelisa izinto ezenziwe ngomatshini (kubandakanya iinxalenye zomgunyathi). I-die casting ishunqulelwe njengokufaka, eyindlela yokuphosa apho ulwelo olutyhidiweyo luthululelwa kwigumbi lokushicilela, umngxuma wokubumba kwesinyithi uzaliswe ngesantya esiphezulu, kwaye ulwelo olungumxube luqina phantsi koxinzelelo lokwenza ukulahlwa. Uncedo luka-Ouzhan bekusoloko kukuzilungiselela iivalve zobhedu, okt iivalve ezenziwe ngobhedu, eziyinxalenye yezamashishini. Inkqubo yokuvelisa yaphuhliswa kuqala ngu Ningbo, Zhejiang e China.
I-Valve ye-OEM yobhedu kunye nokufaka iindawo ezifanelekileyo-ezichanekileyo zobhedu bokukhangela iinxalenye zomatshini
I-Brass ingxubevange eyenziwe ngobhedu kunye ne-zinc, kwaye yinto efanelekileyo yokuvelisa izinto ezenziwe ngomatshini (kubandakanya iinxalenye zomgunyathi). I-die casting ishunqulelwe njengokufaka, eyindlela yokuphosa apho ulwelo olutyhidiweyo luthululelwa kwigumbi lokushicilela, umngxuma wokubumba kwesinyithi uzaliswe ngesantya esiphezulu, kwaye ulwelo olungumxube luqina phantsi koxinzelelo lokwenza ukulahlwa. Uncedo luka-Ouzhan bekusoloko kukuzilungiselela iivalve zobhedu, okt iivalve ezenziwe ngobhedu, eziyinxalenye yezamashishini. Inkqubo yokuvelisa yaphuhliswa kuqala ngu Ningbo, Zhejiang e China. Ekuqaleni kweminyaka yoo-1980, iNingbo, kwiPhondo laseZhejiang zakhokela ekuphuhliseni iinkqubo zokuvelisa, ezatshintsha nembali ende yokusebenzisa izivalo zentsimbi eTshayina. Kwinkqubo yokuvelisa, inkqubo yokubumba isanti yaqala ukwamkelwa, kwaye inkqubo yokubumba yatshintshwa kwii-1990s zokuqala. Uphuhliso ukuya ekuqaleni kwenkulungwane yama-21, i-China iphuhlise iziko lokuvelisa iivenkile zobhedu.Ouzhan inenzuzo epheleleyo ekuveliseni iivalvu zobhedu, ezithengiswa kwilizwe jikelele.
Nokufakwa Ouzhan Valve neZilinganisi umbhobho izixhobo elicwangcisiweyo ukubonisa
Izinto eziluncedo ze-Shanghai Ouzhan zobhedu iinxalenye zakha:
-Ukuphuculwa okuphezulu kokuqhubekeka
-Iipropathi zoomatshini ezilungileyo kunye nokuqhubekeka
Izixhobo zobhedu Elungiselelweyo kunye nezilinganisi Pipe nasekuqiniseni iinxalenye ngoomatshini
Izinto eziphathekayo I-Brass, i-stainless steel, i-carbon steel, njl njl njl
Unyango oluphezulu Unyango umphezulu yobhedu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho, ezifana inkqubo electroplating, inkqubo ngegolide ukutyabeka, inkqubo nokukrola, electrolysis
Inkqubo ephambili Nasekuqhubeni processing
Ukusetyenziswa Unikezelo lwamanzi kunye nemibhobho yokuhambisa amanzi, imibhobho edityanisiweyo, imibhobho yenyoka, imibhobho evaliweyo, iimbumbulu zembumbulu kunye neemveliso ezahlukeneyo zokubetha ezintsonkothileyo, iinxalenye ezincinci zehardware, njl.
Egqithileyo Umenzi waseTshayina u-cnc isinyithi esenziwe ngentsimbi
Elungiselelweyo steel stainless zakha iinxalenye mechani ...